काठमाडौं, ३ साउन । सत्तारुढ दल नेकपाका नेता वामदेव गौतम चर्चामा आइरहने नेताभित्र पर्छन् । मिडियामा सधैं छाइरहने नेताभित्र पनि गौतम पर्छन् । गौतम पछिल्लो समय पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग टाढिदैं गएपछि वालुवाटारमा हल्लीखल्ली मच्चिएको छ ।
पूर्वएमालेमा हुँदा गौतमले ओलीलाई सधैं साथ दिएको उदाहरण प्रशस्तै छन् । त्यसमध्येको एक हो ओली अध्यक्ष । त्यतिबेला गौतमले भरपुर साथ दिएर ओली अध्यक्ष भएका थिए ।
अब प्रश्न उठ्न सक्छ ओलीसँग गौतम किन टाढिए ? अहिले गौतमको साथ कता छ ? तत्कालिन एमालेमा ओली अध्यक्ष भएपछि गौतमलाई संसदीय दलको नेता बनाउने बचन दिएका थिए । तर त्यो ओलीको बोलीमा मात्र सिमित भयो व्यवहार लागू भएनन् अनि गौतम टाढिन सुरु गरे ।
ओलीसँग टाढिदैं गएपछि गौतम पछिल्लो समय अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग धेरै नजिक भएका छन् । पार्टीको हरेक बैठकमा पनि गौतमले अहिले प्रचण्डलाई साथ दिदैं आएका छन् । नेकपाको सचिवालय ९ सदस्यीय रहेको छ। जसमा गौतम र माधव नेपाल समूहले ओलीलाई साथ दिन छाडेपछि अल्पमत परिने डर ओलीलाई छ ।
त्यसो ओलीले गौतमलाई फकाउने प्रयास भने नगरेका होइनन् । पछिल्लो समय गौतमलाई फकाउन हरेक तरिका अपनाइरहेका छन् । गौतमसँग निरन्तर छलफलममा ओली छन् । केहि समयअघि गौतमको ‘वर्थ डे’मा बालुवाटारमै केक काटेर मनाएको पनि नेकपाभित्र छ । पछिल्लो सहमति अनुसार नेकपामा संगठन विभाग पूर्वएमालेको भाग परेको छ । तर प्रचण्डले त्यहाँ पनि आफ्नै मान्छे बनाउन खोजेका छन् । पूर्वएमालेको भागमा परेको उक्त विभागमा गौतमलाई ल्याउने प्रचण्डले वचन दिएका छन् । जसले वालुवाटारमा ठूलै हल्लीखल्ली मच्चिएकाे छ ।
ओलीको त्यो असहयोग, प्रचण्डको त्यो सहयोग
प्रतिनिधिसभाको चुनाव पराजित भएपछि गौतमको संसदीय यात्रामा अहिले ब्रेक लागेको छ । तर उक्त यात्रालाई अगाडी बढाउने प्रयासमा गौतम छन् । गौतमको उक्त प्रयासलाई प्रचण्डले पनि साथ दिएका छन् । तर ओलीले भने असहयोग गरेको गौतम निकट नेताहरु बताउँछन् । काठमाडौं–७ मा रामवीर मानन्धरलाई राजीनामा दिन लगाएर आफु उठ्ने दाउमा गौतम थिए । गौतमलाई प्रचण्ड र नेपालले त साथ दिएका थिए भने ओलीले असहयोग गरेका थिए । जसको कारण गौतमले सांसद भन्ने विषयमा निकै आलोचित पनि बन्नु परेको थियो ।
२०७६ श्रावण ३ शुक्रबार ०७:५०:०० मा प्रकाशित